Global Voices teny Malagasy » Filipina: Gadra Politika Manoratra Diary Avy Any Am-Ponja ao Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Mey 2011 7:01 GMT 1	 · Mpanoratra Karlo Mongaya Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Politika, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Nanangana bilaogy iray handraketana ny fiainany any am-ponja sy ny eritreriny ny mpanakanto Filipiana iray, mpanao gazety sy mafàna fo izay notazonin'ireo manampahefana ao Filipina am-ponja. Ny fianakaviany, ny namany, ireo mpanakanto mpiara-miasa aminy sy mpanoratra avy amin'ny fiarahamonina sivily koa dia nampiasa ny vohikala ho fanentanana ny amin'ny hamotsorana azy.
Teo ampiomanana ny hiondrana an-tsambokely mandeha maotera ho any amin'ny tanàna kely ambanivohitra ao San Jorge any atsinanan'i nosy Samar ao Filipina i Ericson Acosta tamin'ny 13 Febroary 2011 tamin'ny fotoana nisamboran'ny olon'ny mpitandro filaminana ao Filipina azy . Hafahafa ihany, ireo nisambotra an'i Acosta dia mialokaloka amin'ny hoe izy mitondra solosaina finday nefa ho any ambanivohitra no anton-dia. Ny fiampangan-dry zareo azy ho atidohan'ny firohotana kaomionista eo amin'ny tanàna kosa, na izany aza, no tena zavatra tsy ivazivaziana.
Nahatratra 126 no isan'ny maty tsy nisy fitsarana tany amin'io faritra io raha 27 kosa ireo nantsoina hoe desaparecidos (olona tsy hita nanjavonana) tao amin'ny faritra nandritra ny fitondrana teo aloha nentin'i Gloria Macapagal-Arroyo. Teo an-dalam-panoratana ny Toerana misy ny Zon'Olombelona  eo amin'ny faritra i Acosta tamin'ny fotoana nisamborana azy.
Tsy ankitsitsy ny adina nataon'ny tafika an'i Acosta sy ny fiampangany azy ho nitazona tsy ara-dalàna zava-mipoaka. Ireo vondrona fiarahamonina sivily, mpanoratra, mpanakanto, ny fianakaviany sy ny namana dia samy nanameloka daholo ireo fanendrikendrehana namboarina tetsy sy teroa ireo ary mangataka ny hamotsorana azy tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra.
Mbola mitohy voatazona ao amin'ny fonjan'ny tanànan'i Calbayog izay ao Samar ihany koa i Acosta. Araka ny tatitry ny fikambanana KARAPATAN  mpiaro ny zon'olombelona dia fanampiny amin'ireo gadra politika 353 voatàna any amponjan'i Philippines efa hatramin'ny 30 Desambra 2010 i Acosta.
Miverina matetika eo amin'ny sehatra politika ny fanentanana mangataka ny hamotsorana ireo gadra politika rehetra ao amin'ny firenena nanomboka tamin'ny fitondrana jadon”i Marcos. Nandritra ny fotoana maharitra dia nampiharina izay fomba izay mba hamilafilàna, handemena, eny fa hatramin'ny hamonoana ireo izay manelingelina ny governemanta sy ireo mafàna fo miasa amin'ny fampivoarana ny mahantra mihitsy aza.
Iray amin'ireo zava-baovao ao anatin'ny fanentanana ho famotsorana an'i Ericson Acosta ny fampiasàna betsaka sy amin'ny fomba mivoatra ny fitaovana atolotry ny aterineto ho fisoloana vava. Tsy toy ilay filaozaofa Italiana Antonio Gramsci, izay niandry efa ho telopolo taona vao afaka namoaka ny Prison Notes nosoratany, fa ny diarin'i Ericson Acosta azy manokana momba ny fiainany tam-ponja kosa dia mivoaka tsy tapaka ao amin'ny aterineto amin'ny acostaprisondiary.blogspot.com . [angl.].
Ny Jailhouse Blog dia ahitàna ireo zavatra iainan'i Acosta ao am-ponja toy ity fampidirana voasoratra tamin'ny 13 Aprily lasa teo ity :
Eritreritro ny hoe tsy mbola zatra loatra ny fiainako amin'izao fotoana aty am-ponja aho. Hitako ho sarotra ihany ny hanoratra mandritry ny andro. Ny hafanana ato anatin'ity efitra kely ity koa manindry mafy – tsy misy valindrihana ato ary zara raha varavaran-kely ilay hany tokana misy ato, ary ny fandriako rahateo dia tena eo akaikin'ny fatan'arina roa mirehitra tsy miato. Ny tabataba any ivelany sy ny rediredy – indraindray mahatahotra, indraindray mampitovy amin'ny faty mitsangana an'ireo 12 kakosas (mpiray efitra amiko) ao anatin'ity faritra tery dia tery sy mahasavolaina ity, dia tena manelingelina sy mahavaka saina.
Na ilay fampidirana voasoratra tamin'ny 17 Aprily lasa teo :
Amin'ny fomba maro samihafa, ny dalaw (famangiana), hangin (rivotra) ary ny fiandrandràna fatratra aty dia mitovy hevitra daholo ho an'ireo voafonja.
Ny toerana natao ho an'ny famangiana na dalawan dia saika lehibe in-telo lavitra miohatra amin'ny efitrano fifonjàna mahazatra. Ampiasaina koa izy io, ary matetika no antsoina aty hoe pahanginan. Indray mandeha isan-kerinandro, ny isaky ny efitrano tsirairay, misy olona roambinifolo eo ho eo amin'ny ankapobeny, dia mahazo alàlana mba mitsotsotra ao mandritra ny ora vitsivitsy. Ny hevitra ao ambadik'izay dia ny mba hifohana rivotra – tsy voatery ho rivotra madio fa fotsiny – rivotra . Mazàna no tsy ampy ny oksizena any anaty efitrano fifonjàna any, indrindra indrindra fa eo anelanelan'ny amin'ny 10:00 maraina hatramin'ny 3:00 tolakandro. Ary noho izay dia tena zava-dehibe tokoa ho an'ireo voafonja ny pahangin isan-kerinandro izay efa iomanan'ireo mpiray efitrano fatratra toy ny miandry famangiana voarindra mihitsy.
Manasongadina ny fandinihan'i Acosta ny fonja  ihany koa ilay bilaogy:
Efa talohan'ny fisamborana ahy tsy ara-dalàna sy ny fihazonana ahy, efa ela no nanekeko ny hoe, na inona na inona saininy sy tanjony, efa nataon'ity fiarahamonina ity ho mpikambana zara raha hita, sy vahiny aho. Io dia vokatry ny marimaritra iraisana maro, mba tsy hitenenana afa-tsy izay, tamin'ny nisafidianana hiasa fotoana feno ho an'ny firohotana manohitra ny rafitra feodaly, fasista ary ifarimbonan'ireo tantsaha sy mpiasan'ny fambolena mahantra any ambanivohitra.
Tena sorona mavesa-danja be no atao amin'izany hoe voaendaka hiala avy amin'ny tontolo nifamatorana mivantana sy nahazatra izany, raha ny marina… Misy lafiny iray toy ny tantara foronina ihany koa, mazava loatra, ary amin'ny maha-poeta, tsy misy nandao ahy izay sarinà tanimbary sy zaza tsy mikapa, na feom-balala sy goaika niainga tanatiko. Nisy ihany fotoana, na izany aza – ary ireny dia fotoana heveriko ho nandinihan-tena tamim-pahatoniana – toa sahala amin'ny nahatsapako ihany fa izaho no nihataka tamin'ny tononkalo.
Ary ireo tononkalo voasoratr'i Acosta fony tany am-ponja koa dia navoaka tao amin'io bilaogy miresaka fonja io .
Ankoatry ny famoahana anaty aterineto an'io diary tany am-ponja io, ireo mpikarakara ny Free Ericson Acosta Campaign (Fanentanana ho famotsorana an'i Ericson Acosta) dia tonga koa hatrany amin'ny fametrahana fanangonan-sonia anaty aterineto . Nanangana pejy Facebook  iray koa ry zareo izay efa nisy mpitia 788 hatramin'ny fotoana nanoratana an'ity.
Mitohy mitombo hatrany ny fanohanana ilay hetsika ho famotsorana an'i Acosta ary manaporofo izany ireo isa tsy mitsaha-mitombon'ny fanambaràna, fijoroana vavolombelona ary lahatsoratra hafa nangonina ao amin'ny bilaogy fanentanana freeacosta.blogspot.com . Ny ady ho fanafahana an'i Acosta sy ireo gadra politika maro hafa dia mbola mitohy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/05/17/17590/
 nisamboran'ny olon'ny mpitandro filaminana ao Filipina azy: http://www.scribd.com/doc/52797066/ERICSON-ACOSTA-COUNTER-AFFIDAVIT
 Toerana misy ny Zon'Olombelona: http://pinoyweekly.org/new/2011/04/isang-pagsipat-sa-sitwasyon-ng-karapatang-pantao-sa-silangang-kabisayaan
 fampidirana voasoratra tamin'ny 13 Aprily lasa teo ity: http://acostaprisondiary.blogspot.com/2011/04/april-13-2011-press-statement-debacle.html
 fampidirana voasoratra tamin'ny 17 Aprily lasa teo: http://acostaprisondiary.blogspot.com/2011/04/april-17-welcome-visitors-v1.html
 fandinihan'i Acosta ny fonja: http://acostaprisondiary.blogspot.com/2011/05/resbak.html
 fanangonan-sonia anaty aterineto: http://www.ipetitions.com/petition/freeericsonacostacampaign/
 pejy Facebook: http://www.facebook.com/Free.Ericson.Acosta.FreeAllPoliticalPrisoners